को नतीजा आश्रय विश्वव्यापी रोबोट। श्री सहयोगी कसरी मिलाउने?
तपाईं सकेसम्म सहज थियो आश्रय रहन चाहनुहुन्छ? को कोठा सफा थिए लागि, छोराछोरीलाई खुवाउनुभयो र स्रोतहरू replenished र बासिन्दाहरू सुरक्षाको भावना थियो कहिल्यै? यदि यति, कम्पनी जनरल Atomics मद्दत गर्न तयार छ। सजिलै घरमा सबै आवश्यक काम गर्न सक्ने एउटा रोबोट - तपाईं के गर्न आवश्यक सबै श्री सहयोगी आदेश छ। तर तिनीहरूले उहाँको बारेमा भन्न रूपमा, त्यसैले विश्वसनीय र राम्रो छ भने?
यस मामला मा यो नतीजा आश्रय रुचि खेलाडीहरू हुन सक्छ तीन प्रश्न गरिनेछ। कसरी श्री सहयोगी, यो कसरी प्राप्त गर्न समाधान गर्न, र यो Refuge रोबोट आवश्यक कि?
को सहायक को इतिहास
श्री सहायक - श्रेणी पर्छ कि उपकरण छ घर रोबोट को, सामान्य Atomics गरेर युद्ध अघि सिर्जना गरियो। तिनीहरूले सार्न वा बरु, जेट इन्जिन को मद्दतले उड र काम सबै प्रकारका गर्न धेरै manipulators छ। आफ्नो उद्देश्य - गरिरहेको छोराछोरीको घरको, कुकुर पैदल, हेरविचार, तर पनि केहि भने, उनीहरूले पनि दिन सक्छ, फिर्ता लड्न। आखिर, तिनीहरूले एक परिपत्र देख्यो, एक flamethrower वा लेजर संग सुसज्जित छन्।
खेल को नतीजा श्रृंखला (श्री आसान) बाट रोबोट सहायक मूल निर्माण वा मर्मतसम्भार उद्देश्यका लागि गर्भधारण थिए। विशेष गरी राम्रो तिनीहरूले 2042 मा मेक्सिको सिटी मा भूकम्प पछि Rubble पार्सिङ समयमा आफूलाई देखाएका छन्।
काम धेरै कारण त्रुटिहरू को ठूलो संख्या पहिलो मोडेल घर रोबोट देखि, श्री सहयोगी को प्रीमियर उपस्थिति देखि गरेको छ अस्थिर हुन्छ। यो केवल पछि तिनीहरूले सफ्टवेयर कर्नेल र सुधार कार्यक्षमता समाप्त भएको थियो। कि पछि तिनीहरूले कुराकानी पकड गर्न सक्छन् र पनि आफ्नो मास्टर मनोरन्जन गर्नु।
खेल नतीजा आश्रय मा श्री सहायक धेरै उपयोगी उपकरण मानिन्छ। शत्रु, आगो लड र भल्ट बाहिर कवर को पनि संग्रह संग लडाई: कुनै पनि काम लिन व्यावहारिक तयार भएकोले।
नतीजा आश्रय: श्री सहयोगी कसरी प्राप्त गर्ने?
कसैले रोबोट रुचि छ भने, तपाईँले तीन तरिकामा यो मोडेल प्राप्त गर्न जान्नुपर्छ:
Lunchbox। "भल्ट-Tec" बाट Lunchbox सामान्यतया रोचक कुरा धेरै हुन्छन्। र यो मामला मा श्री सहायक "कुनै अपवाद छ। को नतीजा आश्रय lunchbox केही कार्य को लागि एक इनाम को रूपमा दिइएको। वा हरेक सातौं दिन खेल मा बिताए।
दोकान मा खरीद। खेल भण्डारमा तपाईं श्री सहयोगी सहित उपयोगी जानकारी, धेरै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो रोबोट को बिक्री पनि पुरा सेट।
को परती भूमि पाउन। यो विकल्प असम्भाव्य छ, तर यो एकदम सम्भव छ।
यसलाई ध्यानमा सार्ने गर्नुपर्छ स्वतः जिम्मेवारी यसको क्षेत्रमा निरन्तर सबै घटनाहरू मा भाग लिन हुनेछ रोबोट को अधिग्रहण पछि हो कि। र यो पनि भल्ट आक्रमण घृणा उत्पन्न लागू हुन्छ। यसलाई त्यसैले स्पष्ट प्रश्न धेरै खेलाडीहरू नतीजा आश्रय छ: श्री मेट कसरी मिलाउने, उहाँले ग्रस्त भने? त्यसैले यो रोबोट भल्ट को बासिन्दा लाभ हुनेछ कि, पत्ता लगाउन भनेर पछि, तर पहिलो आवश्यकता थप।
यो उपयोगी सहायक?
वास्तवमा, यो देखि लाभ धेरै, किनकी यो भल्ट भित्र फरक जब प्रदर्शन गर्न सक्षम र बाहिर छ:
जम्मा स्रोतहरू। यो धेरै, सुविधाजनक विशेष गरी धेरै यस्ता रोबोट यदि छ। आखिर, सत्य यो उहाँलाई नियुक्त गरिएको छ जो तल, यति केवल गर्छ भन्ने छ। र यो केवल ऊर्जा संग्रह, पानी र खाना छ। विशेषताहरु हुर्काउन वा निवासी लागि को रूप मा, खेलाडी आफैलाई गर्न हुनेछ।
सुरक्षा भल्ट। एक परिपत्र देख्यो वा flamethrower: पहिले नै उल्लेख रूपमा, एक आक्रमण रोबोट को घटना मा हतियार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले कोठा को एक आक्रमण यदि भनेर परमेश्वरले निषेध, रोबोट पछाडि जानुहोस् र शत्रुले दण्ड गर्ने प्रयास गर्न आवश्यक छ। र यदि आगो, सहायक, आगो निभाउने साथ सशस्त्र त्यहाँ छ, स्वतः आफ्नो उन्मूलन गर्न जाने। यस सन्दर्भमा यो हात द्वारा आकर्षित गर्न भएका साधारण नागरिकहरु उच्च छ।
उजाडस्थानमा मा Forays। रोबोट राम्रो भल्ट बाहिर उपयोगी हुन सक्छ। यो Wasteland पठाइएको छ भने, त्यो आवरण भेला हुनेछ। यस मामला मा, तपाईं आफ्नो प्राविधिक अवस्था बारे चिन्ता गर्न सक्दैन, यो त्यहाँ जोखिममा हुनेछ असम्भाव्य छ। सबै पछि, रोबोट विकिरण को डर छ, र त्यो खतराबाट जोगिन खोज्छ। मात्र नकारात्मक भल्ट को सङ्कलन गर्नेछ गर्दा आवरण बासिन्दा उहाँलाई बिना गर्न हुनेछ छ।
नतीजा आश्रय: श्री सहयोगी कसरी मिलाउने?
रोबोट बलको एकदम उच्च स्तर भन्ने तथ्यलाई बावजुद तोड्न यो अझै पनि सम्भव छ। निस्सन्देह, एक आश्रय मा प्रत्येक आक्रमण वा आफ्नो कोठा मा आगो, श्री को प्राविधिक अवस्था संग आसान मात्र खराब प्राप्त हुनेछ। र, फेरि प्रश्न, खडा रुचि खेलाडीहरू नतीजा आश्रय: श्री सहयोगी कसरी मिलाउने?
दुर्भाग्यवश, यो सम्भव छैन। अहिलेसम्म यसको प्रदर्शन सुधार गर्ने उत्तेजक साथ आएको छैन भन्ने तथ्यलाई। त्यसैले हामी यसलाई पूर्ण खण्डन सम्म प्रतीक्षा, र त्यसपछि कवर को माध्यम द्वारा रोबोट पुनर्जीवित छ।
कोड र trainers
खेलको आगमन धेरै समय लिनुभयो देखि, त्यसैले खेलाडीहरू लामो तिनीहरूले पार खेलमा disclosed कि रहस्य साझेदारी गरिएको छ। तर धेरै नतीजा आश्रय कोड लागि त्यहाँ छ कि छैन भनेर सोच छन्। आखिर, तिनीहरूलाई थाह, तपाईं पहिलो पटक कुनै पनि समस्या बिना प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। बस त्यहाँ स्रोतहरू, कवर वा lunchbox अभाव छ भनेर कल्पना गर्नुहोस्। दुर्भाग्यवश, नतीजा आश्रय कोड मा अझै प्रदान गरेको छैन।
तर प्रशिक्षक भनिन्छ कि कार्यक्रम संग कुनै समस्या छन्। तिनीहरूले विकिरण विरुद्ध स्रोतहरू Refuge, lunchbox र कवर, आशाजनक अमरता, आनन्द को उच्चतम स्तर, सुरक्षा को अनन्त आपूर्ति, चूहहरुमा र अन्य कुराहरू बिना कोठा प्रदान सजिलो नतीजा आश्रय पारित बनाउन प्रतिज्ञा।
महल "Minecraft" - योजना, निर्माण, हामी आनन्द
खेल Dishonored: पीसी लागि सिस्टम आवश्यकताहरु
सर्भर पहुँच कसरी: प्रयोगको लागि निर्देशन
नतीजा3दुर्घटनाहरु: के?
को Fallen प्रभु सुरु गर्दैन - के?
"Baradin होल्ड": को धावा तहखाने को विवरण
Pinus mugo - पहाड पाइन: रोपण र हेरविचार
कसरी कम्प्युटरमा पासवर्ड राख्न
सामाजिक Darwinism: एक सामाजिक सिद्धान्त वा खतरनाक मिथक?
एक संगठन को व्यवस्थापन एक उद्यम प्रबंधन प्रणाली हो
व्यावसायिक फोटोग्राफर कर्पोरेट अथवा के को उत्सव लागि गोली?
मिडिया प्लेयर गर्न छनौट? लोकप्रिय खेलाडीको अवलोकन
फूल Bells - आकर्षक रूसी बोट वनस्पति
Fistula Rectal क्यान्सर: लक्षण, उपचार लोक घरमा उपचार। सर्जरी बिना rectal fistula को उपचार: समीक्षा
भेनिस बाढी। तत्व शहर छोडूँगा छैन